Siyini isiqalo sePhono? - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ama-Connexions asungulwe ngonyaka we-2004 eChina, ungumkhiqizi ochwepheshe bama-Audio, izintambo zevidiyo nama-adaptha.
Abantu abasha abangakaze basebenzise i-turntable ngaphambili balindele ukuthi i-turntable izodlala nje, noma okungenani bavele baxhumane nohlelo lwabo lwe-stereo noma izikhulumi. Kungenzeka kungacaci kahle uma ama-turntables abo eza nawoPhono Preampnoma cha.
Abaqondi okubaluleke kakhuluamaphuzukunoma yiluphi uhlelo lokudlala lwe-vinyl - i-phono preamp. Isiginali ephuma kugobolondo ku-turntable yakho icishe iphindwe izikhathi eziyi-1 000 kunesiginali ephuma kusidlali se-CD noma kudivayisi yokusakaza. Ukuze uzwe umculo ovela ku-vinyl ngezipikha zakho noma ngohlelo lwe-stereo, udinga kuqala ukukhulisa isignali. Yilapho kungena khona i-phono preamp.
I-phono preamplifier ebizwa nangokuthi isigaba se-phono iyisici somsindo esikhulisa isignali kusuka ku-turntable yakho iye ezingeni elikuvumela ukuthi uyixhume ohlelweni lwakho lomsindo ngendlela efanayo ongawenza ngayo nomunye umthombo womsindo.
Omunye umsebenzi obalulekile wePhono preampukusebenzisa ijika lokulinganisa le-RIAA kusiginali, ukuyibuyisela emuva esimweni ebikuso ekurekhodweni kwasekuqaleni, kepha uma usaqala, lokhu kungajula kancane kunalokho odinga ukuya khona manje. Into ebaluleke kunazo zonke ukwazi ukuthi uzodinga isitampu se-phono ukuze ujabulele amarekhodi akho e-vinyl.
Ungahlola kanjani ukuthi usuvele unayo i-phono isiqalonoma cha?
Ama-preono ePhonono eza ngazo zonke izinhlobo zobukhulu nosayizi. Eqinisweni, ezinye zakhiwe ngisho nezingxenye. Ngenkathi umdlandla womsindo obucayi ngokwedlulele ethembele ekubeni ne-phono preamplifier ehlukile, umehluko ongakanani owenzayo uzoncika kakhulu kusistimu yakho yonke.
Ngaphambi kokuthi unqume ukubhekabheka ngokukhethwa kwethu kwezigaba ze-phono, qiniseka ukuthi awunayo! Ungahlala ubuya futhi uthuthukise kamuva ukuthuthukisa umsindo.
Okokuqala, ake siqale ngokusobala. Uma unokubukeka njengebhokisi elingahleliwe elinokufakwa okukodwa, isethi eyodwa yokuphumayo, isikulufa esincane somhlabathi, futhi kubhalwe ukuthi phono, unenhlanhla! Unesigaba se-phono.
I tUrntable ngePhono preamps ngaphakathi.
Amanye ama-turntable amasha eza ne-phonoisiqalobuilt-in. There is no real rhyme or reason to which tables have one built-in. We’ve seen very inexpensive suitcase tUrntable ngebuilt-in phono stages, but they’re also included in high-performance tables including the Shinola Runwell and the VPI Player.